Creative Writing » အ​ဟောင်းကို အကုန်​ဖြုတ်​ပါမှ အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​	5
အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​ ​ရေးလည်း ​ရေးချင်​တယ်​ ။ ​ရေးလည်းမ​ရေး ရဲဘူး ။ ​ဆိုတာလိုပဲ ။ ကဲ………ဆို​ရေးရှိက ဆက်​ဆိုယုံပဲ​ပေါ့ ။ ဘာအ​ကြောင်း ​ပြောရမလဲ ။ လူတိုင်း​ပြော​နေတဲ့ ၂၀၁၅ အ​ကြောင်းပဲ​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ သူတစ်​ကာ​တွေလို ဆဲမှာ​တော့ မ​ဟုတ်​ဘူး ။ ဒီစာဖတ်​မိတဲ့ သူဆဲချင်​ဆဲပါ​စေ​လေ …….ဆိုတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးဖြစ်​တာ ။ လူတိုင်းသိပြီးသား ၂၀၁၅ မှာဘာ​မျှော်​လင့်​သလဲဆိုတာ ။ ပြည်​သူ့ကိုယ်​စားပြု ဒီမိုက​ရေစီ အစိုးရကို ​တော်​​တော်​များများကလိုလား ​နေကြတာ ။ ​နေ၀န်းနီ ​တွေး​နေမိတာက တိုင်းပြည်​က ဒီမိုက​ရေစီ အစိုးရအုပ်​ချုပ်​တာနဲ့ အဲ့တိုင်းပြည်​ ဒီမိုက​ရေစီရ​ရောလား ။ ဒီမိုက​ရေစီ ဆိုတာ ​ရော့ အင့်​ လို့​ပေးလို့ရတဲ့ အရာလား ? ပြည်​သူက​ကော ဒီမိုကရက်​တစ်​ ဖြစ်​​နေဖို့မလိုဘူးလား ။ ဒီမိုကရက်​တစ်​ဖြစ်​ဖို့ အ​ခြေခံ အ​ကြောင်းတရားဖြစ်​တဲ့ ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​ ရာနှုန်းပြည့်​ထားနိုင်​ပြီလား ? ။
ပညာ​ရေးမှာ​ကော မူလတန်းကတည်းက ကျူရှင်​မှ မယူရင်​ မဖြစ်​တဲ့ စနစ်​ကို ခင်​ဗျားတို့ ကြိုက်​ကြလား ။ အတန်း​လေး နဲနဲ ကြီးလာ​တော့ ဂိုက်​ တဲ့​ဘော်​ဒါ တဲ့ ။ အတန်းပိုင်​ဆီမယ်​ ကျူရှင်​ယူစရာ မလိုတဲ့ ပညာ​ရေးစနစ်​ ဂိုက်​တို့ ​ဘော်​ဒါတို့ မလိုတဲ့ ပညာ​ရေး စနစ်​ ​ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးလား ။ ဒါ​တွေ အသံထွက်​လာတာ ၁၉၈၈ ​နောက်​ပိုင်းမှပါ ။ ၈၈ မတိုင်​ခင်​က ဆို ကျူရှင်​ဆိုတာ​တောင်​ ဘာသာတိုင်း မရှိပါဘူး ။ စာမလိုက်​နိုင်​တဲ့ ​ကျောင်းသား​လောက်​ပဲ အပြင်​ကျူရှင်​ယူကြတာ ။ အဲ့ဒိတုန်းက ပညာ​ရေးက လည်း အခု လက်​ရှိထက်​မနိမ့်​ကျပါဘူး ။ ပညာ​ရေး အဆင့်​မြင့်​လာတာလို့​တော့ မ​ပြောနဲ့ ။ ပညာ​ရေး အဆင့်​မြင့်​လာတယ်​ဆိုရင်​ ခုဆယ်​တန်းတက်​​နေတဲ့က​လေး အိမ်​နီးချင်းနိုင်​ငံက စစ်​တဲ့ အတန်းတူ စာ​မေးပွဲ တစ်​ခု​လောက်​ ၀င်​​ဖြေခိုင်းကြည့်​မလို့ ။ ကဲ အဲ့ဒိ​တော့ ​ရှေ့က မူဝါဒ အ​ဟောင်း​တွေ စာရွက်​​ပေါ်မှာ မဖြစ်​ညစ်​ကျယ်​ ဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်း​တွေ ဖြုတ်​ချရမှာပဲ ။ အဲ့သလို ဖြုတ်​ချနိုင်​ဖို့ အတွက်​ လူထု ကြားထဲမှာ ထည်​ထည်​၀င်​၀င်​ မ​နေဖူးပဲ အ​ပေါ်စီးက​နေ ​တောင်​တစ်​ခွန်း​မြောက်​တစ်​ခွန်း ​ပြော​နေတဲ့ သူ​တွေကိုလည်း ဖြုတ်​ချရမှာပဲ ။ ဒါမှ လက်​ရှိ အ​ခြေအ​နေနဲ့ ကိုက်​ညီတဲ့ စနစ်​ လက်​ရှိ လူထုရဲ့ လိုအပ်​ချက်​ ကိုဖြည့်​စည်း​ပေးနိုင်​မဲ့ အစိုးရ တစ်​ရပ်​ ​ပေါ်ထွန်းလာမယ်​ ။ ​ပေါ်ထွန်းလာဖို့လည်းလိုမယ်​ ။ အဲ့သာ​ကြောင့်​
အ​ဟောင်း အကုန်​ဖြုတ်​နိုင်​မှ အဟုတ်​တစ်​ကယ်​ ​ပြောင်းနိုင်​မှာပါ လို့ ။ ​နေ၀န်းနီ
2015 Oct 31 About naywoon ni
ဦးကြောင်ကြီး says: အကုန်ပြောင်း သူပုန်ဟောင်း ဒဂုံပြောင်း ဂဠုန်ဒေါင်း
မြစပဲရိုး says: အဘနီ ရေ
naywoon ni says: အဲ့ ကိစ္စ ( ဥပ​ဒေ စိုးမိုး​ရေး ကိစ္စ ) ​ပြောရရင်​ ဆရာ ​ကျော်​၀င်းရဲ့ “ဒရွတ်​တိုက်​ ဆွဲ​ခေါ်ခြင်း ” က​နေပြန်​​ပြောချင်​တာ နဲနဲ ​စော​နေ​သေးလားလို့ ၈ ရက်​​နေ့ ​နောက်​ပိုင်းမှ ​ပြောမလို့ ​စောင့်​​နေတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ရှစ် ရက်နေ့နောက်ပိုင်း မှာ ကိုယ့်လူ တွေ အတွက် အလုပ်တွေ ပိုပြီး ရှုပ်ချင် ပါတယ် အဘနီရယ်။
Mike says: ခုတလော အာဃာဓ မကင်းတဲ့ စကားတွေ၊ မနာလိုခြင်းကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ စကားတွေကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာမိပါဘူး။ သင်္ကန်းကျွန်း အမတ်တစ်ဦးက “အခုပုံက ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင် ဖြစ်လာမယ်” လို့ ပြောလိုက်တာ ဖတ်မိတော့ ပြောစရာရှိလာပါတယ်။